Arashukov राउल Turkbievich: धुलो, जीवनी, शिक्षा, राष्ट्रियता
Arashukov राउल - चिरपरिचित रूसी राजनीतिज्ञ र प्रबन्धक, एक व्यवसायी। पनि गोल र परोपकार क्षेत्र। क्षण, सीमित दायित्व कम्पनी "Gazprom mezhregiongaz" को सामान्य निर्देशक गर्न सल्लाहकारहरू मध्ये एक मा। उहाँले पार्टी को Karachay-Cherkessia "संयुक्त रूस" को गणतन्त्र राष्ट्रिय सभा को सदस्य हुनुहुन्छ। उहाँले पूर्व प्रत्यक्ष कम्पनी "Gazprom mezhregiongaz" को Stavropol शाखा को टाउको थियो, र पछि संगठन "Stavropolkraigas" लाग्यौं। जे भए पनि, आफ्नो व्यावसायिक गतिविधि सधैं ग्याँस उद्योग संग लिङ्क गरिएको छ।
जीवनी राजनीतिज्ञ र व्यापारी
Arashukov राउल Karachay-Cherkessia एउटा सानो गाउँमा Khabez मा जन्म भएको थियो। यो 1960 मा भयो। उहाँले धेरै भाइबहिनीहरू थिए, त्यसैले प्रारम्भिक काम गर्न जाने थियो।
आफ्नो काम पेसा Arashukov राउल Turkbievich एक देहाती खेत मा, स्कूलमा अझै पनि बेला थाले। त्यसपछि उहाँले सेना मा सेवा गरिरहेका थिए। म Stavropol सहकारी कलेज प्रवेश। उच्च शिक्षा Arashukov राउल उत्तर काकेशस प्राविधिक विश्वविद्यालय मा प्राप्त। उहाँले एक डिग्री छ "अर्थशास्त्र र तेल र ग्याँस उद्योग को संगठन।" हामी आफ्नो पालन-अप सबै विशेष शिक्षा सँग सम्बन्धित थियो भनेर भन्न सकिन्छ।
अभियुक्तहरुलाई दोषी Arashukova
यो लेखको नायक को यो जीवनी मा कुनै दोष नभएको बाट टाढा छ। उहाँले एक छायादार व्यापार छ भन्ने तथ्यलाई उहाँले सोभियत संघ अन्तर्गत चार्ज थियो। त्यसैले, Arashukov दुई अघिल्लो अभियुक्तहरुलाई दोषी छ। दुवै आर्थिक अपराध सम्बन्धित छन्। 1985 मा, Arashukov राउल Turkbievich को सोभियत संघ "ठगी" को आपराधिक कोड अन्तर्गत सुनाइसकेको थियो। जांच आफ्नो कार्यहरू अन्न चार टन को चोरी परिणाम कि अन्तमा। यसलाई आफ्नो पहिलो गम्भीर ठेस थियो भएकोले उहाँले दुई वर्ष परिवीक्षाधीन पाए।
र 1987 मा Arashukov राउल तैपनि वास्तविक अवधि सुनाइसकेको थियो। अदालत यसलाई स्पष्ट सूर्यमुखी पाँच टन सम्मानित झूटा कागजात छ भन्ने तथ्यलाई लागि सामान्य शासन बस्ती को दुई र आधा वर्ष उसलाई सजाय सुनाई। तपाईं देख्न सक्नुहुन्छ रूपमा, सम्पूर्ण छायादार व्यापार Arashukova विशाल थियो, चोरी को राशि सधैं टन मा गणना गरिएको छ।
ग्याँस उद्योग मा काम
सीधा ग्याँस उद्योग Arashukov सोभियत पतन पछि थाले काम। श्रम यस क्षेत्र मा, त्यो Karachay-Cherkessia मा कम्पनी को सामान्य निर्देशक "Gazprom Mezhregiongas" को जिल्ला शाखा गर्न उद्यम स्तर मा एक इन्जिनियर हुँदा भयो। यसलाई मारा जब वित्तीय र आर्थिक संकट 1998 मा देश को लागि भारी मा, Arashukov को Stavropol क्षेत्रमा यस्तै स्थिति लिए।
को Stavropol क्षेत्रमा गतिविधिहरु
Stavropol Arashukov शाखा "Gazprom Mezhregiongas" को निर्देशक 1998 को अन्त्यमा थाले। एक वर्ष पछि उनले संगठनको सीईओ रूपमा लियो। यो स्थिति मा, त्यो 2007, Arashukov प्यतिगोर्स्क मा नै शाखा को उप टाउको हुँदा सम्म, लगभग सबै 2000s लागि काम गरे। यो स्थितिमा उहाँले क्षेत्र र संघीय स्तरमा लगभग सबै कार्यकारी र विधायी शक्ति सम्बन्ध लागि जिम्मेवार थियो। यसबाहेक प्रभाव Pyatigorsky शाखा क्षेत्र एक क्षेत्र वा एउटा किनारा सीमित छैन। हामी Karachay-Cherkessia, Kabardino-Balkaria, Dagestan, Ingushetia र उत्तर Ossetia को अधिकारीहरु संग कुराकानी भएको थियो।
यो लेखको नायक समावेश जो 2007 Arashukovyh कुल, मा, व्यवस्थापनका लागि नयाँ सम्पत्ति प्राप्त गरेको छ। राउल रूसी क्षेत्रहरु मार्फत ग्याँस पाइपलाइन बढी भन्दा तीस हजार किलोमिटर स्वामित्व जो कम्पनी, को "Stavropolkraigas" टाउको नियुक्त गरियो।
"Gazprom Mezhregiongaz प्यतिगोर्स्क" - अर्को Arashukov क्यारियर सफलता 2010, उहाँले तेस्रो कम्पनी नेतृत्व गर्दा मा हासिल। कि पछि, निर्धक्क भई सबै Arashukov ग्याँस फिडर मा खडा भनेर घोषणा गर्न थाले। उत्तर काकेशस गणराज्यहरु - फलस्वरूप, जिम्मेवारी यसको तत्काल क्षेत्रमा उहाँले रूसी संघ को क्षेत्र मा सबै भन्दा चुनौतीपूर्ण र जटिल क्षेत्रमा एक भए।
"Gazprom" मा क्यारियर
"Gazprom" Arashukova मा क्यारियर थप तेजी भन्दा विकास गर्न थाले। डिसेम्बर 2011 मा, त्यो संघीय कार्यालयमा बढुवा भएको थियो। "Gazprom mezhregiongaz" - उहाँले रूस को क्षेत्रहरु मा ग्याँस को कार्यान्वयन मा लगे थियो जो सबै-रूसी Inter-क्षेत्रीय कम्पनी, सामान्य निर्देशक, गर्न सल्लाहकारहरू मध्ये एक थियो। आफ्नो काम उत्तर काकेशस संघीय जिल्ला मा काम समन्वय थियो।
देश को सबै भन्दा ठूलो ग्याँस कम्पनी को टाउको मा प्रभावकारी काम गर्न, Arashukovu सुधार को एक श्रृंखला पकड थियो। उदाहरणका लागि, काकेशस क्षेत्रमा विशेष गैर-भुक्तानी समस्या उच्चारण गरिएको छ। प्रारम्भिक 2000s मा Arashukovu स्थिति परिवर्तन गर्न व्यवस्थित। तल लाइन यो समस्या समाधान गर्न थियो, त्यहाँ कुनै क्रमबद्घ दृष्टिकोण थियो। Arashukov यसलाई फेला परेन। सकेसम्म उहाँले Stavropol शाखा सञ्जाल, कहिलेकाहीं भुक्तानी अनुशासन सुधार भएको छ, जो मार्फत संगठित। यो लेखको नायक केही वर्ष भित्र 30 प्रतिशत 12 प्रतिशत देखि पुगेको छ कम्पनी को व्यवस्थापनका लागि भुक्तानी सङ्कलन। शाखा को नेटवर्क पूर्ण सिर्जना भएपछि, भुक्तानी को स्तर लगभग 100% पुगेको छ।
जन्म द्वारा एक Circassian रूपमा, त्यो सम्बन्धित मान्छे, तर पनि छिमेकी गणराज्यहरु मात्र होइन जित्न सक्षम थियो। स्वचालित प्रणाली "ग्याँस लागि जनसंख्याको गणना" फल सार्ने भएको छ। यो Stavropol क्षेत्र सबै सदस्यहरू दुवै व्यक्तिविशेष र व्यवसाय, धेरै गैर-payers सहित एक एकीकृत डेटाबेस सिर्जना गर्न व्यवस्थित। Arashukove को उद्योगपति र ठूलो संगठन संग ग्याँस को आपूर्ति बारे 14,000 ठेके हस्ताक्षर भएको थियो, यो लगभग एक लाख सदस्यहरू एक डेटाबेस सिर्जना गर्न सम्भव थियो।
हाम्रो लेखको नायक विवाहित छ। उहाँले पाँच जना छोराछोरी छन्। सबैभन्दा तिनीहरूलाई को प्रसिद्ध रउफ Arashukov। आफ्नो बुबालाई धन्यवाद उहाँले एक शानदार क्यारियर बनाउन व्यवस्थित। 23 मा पहिले नै उहाँले श्रम र Karachay-Cherkessia को गणतन्त्र को सामाजिक विकास को मन्त्री को कुर्सी लिए। तथापि, भन्दा कम एक वर्ष गणतन्त्र को टाउको गर्न सल्लाहकारमा बन्ने पोस्ट बाँकी।
शक्ति आफ्नो बाटो साँच्चै शंकास्पद थियो। उहाँले अझै पनि कसलाई धेरै भनिन्छ आफ्नो बुबा, मा माटो को संग्रह लागि आधार छ "ग्याँस राजा।" त्यसैले, 17 वर्ष मा रउफ Arashukov Stavropol को शहर Duma एक उप बन्न, एक सानो हुनुको गर्दा व्यवस्थित। यस्तो blatant उदाहरण पछि यो एक उम्मेदवार तिनलाई दर्ता जो निर्वाचन आयोग, या त स्पष्ट झूटा कागजात वा गलत जानकारी प्रस्तुत गरेका थिए स्पष्ट हुन्छ।
यस्तै अवस्था सेवक को पोस्ट आफ्नो नियुक्ति समयमा भयो। समय द्वारा उहाँले अहिलेसम्म उच्च शिक्षा प्राप्त गर्न समय थियो थिएन। सेवकाई सीट उहाँले समय अध्ययन भने, उनीहरूले अन्तिम परीक्षा दिनसके अघि कम्तिमा छ महिना पाएका थिए। उहाँले पहिले नै भएको थियो रूपमा डिप्लोमा। र धेरै प्रतिष्ठित।
साथै, अद्वितीय Prodigy "ग्याँस राजा" को छोरा अझै पनि गरेको छैन छ नागरिक सेवा व्यवस्था को कुनै उल्लङ्घन हो भन्ने मानेर। आखिर, उहाँले मन्त्री व्यवस्था विपरीत छ सार्वजनिक सेवा, कुनै अनुभव थियो जो मानिसको नियुक्त गरियो। र साँच्चै, त्यो समयमा थियो जेठोपन अहिलेसम्म खुला थियो।
वर्तमानमा, जवान प्रबन्धक Karachay-Cherkessia को भाग हो जो प्रशासन Khabez जिल्ला, टाउको छ। उहाँले6पटक वृद्धि सांप्रदायिक सेवाहरु लागि जनसंख्या लागि शक्ति शुल्क मा बिताएको समय को लागि देख्ने, रूपमा। यो गणतन्त्र मा आपराधिक भूत र वर्तमान रउफ Arashukova बारेमा अफवाहहरु संग rife छ। यो समयमा, त्यो कठिन-मार प्रतिष्ठा संग अशिक्षित आधिकारिक को छवि थियो।
परोपकारी गतिविधिहरु Arashukova क्रम
यसरी उहाँले Arashukov क्रम छविको तरिकामा आफ्नो खुत्रुके पोइन्ट सबै प्रकारका संकलन गर्न खोज्छ। उदाहरणका लागि, उहाँले सक्रिय दान र परोपकार संलग्न छ, यो धेरै Kindergartens, विद्यालय, अस्पताल र क्लिनिक, monasteries गर्न पर्याप्त प्रायोजन प्रदान, सम्पूर्ण जिल्लाको सामाजिक र आर्थिक जीवनको लगभग सबै क्षेत्रहरू मा समावेश छ।
ठेगाना Arashukov धेरै चिकित्सा संस्थाहरू समर्थन गर्दछ। लागि किशोरीहरूको Arashukov राउल Turkbievich नै समय शैक्षिक बस्ती को न्यासी बोर्ड को भाग मा। उनको हालत ठ्याक्कै ज्ञात छैन, तर सबै भन्दा विशेषज्ञहरु गैर-systemic भनेर विश्वास गर्न इच्छुक छन् र सहयोग लक्षित आफ्नो आय असर गर्दैन।
पनि प्रसिद्ध Circassian लेखक र philological विज्ञान को डाक्टर, Hapsirokov Nazir Hizirovich नाम को नाम असर, गर्न "ग्याँस राजा" एक लिसेयुम-बोर्डिङ स्कूल छ प्रायोजन।
खेल मार्फत प्रायोजन
ठूलो योगदान Arashukov विशेष फुटबल, मोटरस्पोर्ट, विभिन्न मार्शल आर्ट शक्ति, खेल को स्थानीय विकास गर्न योगदान पुग्छ। उहाँले जन्म भएको थियो जसमा एक Khabez गाउँ, स्टेडियम आधुनिक फुटबल मैदान र दुई टेनिस कोर्ट निर्माण भएको थियो। अनुप्रयोगको टोली - यो प्रशिक्षण देश मा सबै भन्दा राम्रो युवा फुटबल टोली मध्ये एक छ कि यहाँ छ। 2011 मा, त्यो आफ्नो उमेर खेलाडीहरू बीच राष्ट्रिय च्याम्पियनशिप जित्यो। समय, त्यहाँ पुनःस्थापित र बक्सिङ क्लब गरिएको छ। 2010 देखि, पर्व सालाना Arashukova "प्रार्य गठन खेल" को समर्थन संग आयोजित गरिएको छ। यो सोची मा ओलम्पिक खेल भविष्य विजेता भाग लिए।
Stavropol काम, Arashukov प्रसिद्ध स्थानीय फुटबल क्लब "डायनेमो", एक पटक राष्ट्रिय च्याम्पियनशिप को प्रमुख विभाजन प्ले अध्यक्ष थिए। टोलीमा अब तेस्रो-सबै भन्दा ठूलो रूसी फुटबल लिगमा languishing छ। तर, यो Arashukove टोलीमा राष्ट्रिय टोली स्ट्राइकर सर्गेई Yuran एक कोच प्रसिद्ध स्ट्राइकर रूपमा निमन्त्रणा गरिएको थियो छ। तर, स्थिति उहाँले चाँडै समाधान गर्न सकेन। टोलीमा पहिलो प्रभाग गर्न उन्नत, तर चाँडै दोस्रो लिग फेरि फर्के।
दानियल Kotsjubinsky: जीवनी र फोटो
ब्लगर Kristina Shelest (युमेन): उमेर
Yekaterina Novikova: क्यारियर र जीवनी
Dzhuzeppe Meatstsa: जीवनी, उपलब्धिहरू र फोटो
संसारको सबैभन्दा सुन्दर युक्रेनी महिला। प्रसिद्ध सुन्दर युक्रेनी
कसरी स्वस्थ रहन चिकन खाना पकाउनु?
एउटा सानो हलवे गलियारे लागि रोचक
उद्यमी मा बजेट
पहिलो कीव राजकुमारहरू
कम्पनी सफाई। परिचय दिशा
विषय र को मूल्य: व्यवस्था को शाखा रूपमा संवैधानिक व्यवस्था
को neuromuscular उत्तेजना को एकाइ - चिकित्सा उपकरण "पारा" देखाउन? समीक्षा विशेषज्ञहरु
को ग्रीनहाउस मा पहेंलो खीरे। कारण के हो?
सबैभन्दा महंगा विवाह तारा
होटल ब्लू ईजियन4* (ग्रीस, क्रेते): समीक्षा, वर्णन, संख्या र समीक्षा
को प्रतीक मौसम कसरी पढ्ने